Thwebula Advanced SystemCare 13.3.0.232 Standard... – Vessoft
WindowsUhleloUkuhlanza nokuthuthukisaAdvanced SystemCare
Isigaba: Ukuhlanza nokuthuthukisa
Ikhasi elisemthethweni: Advanced SystemCare
Uhlelo Advanced – a isofthiwe ukuthuthukisa ukusebenza computer futhi silungise izimbungulu ohlelweni lokusebenza. Isofthiwe uhlelo bese uhlanza computer yakho kusuka spyware kanye adware, silungise amaphutha ebhukwini ohlelweni, ukususa amafayela esikhashana futhi okungadingekile, ukusula umlando isiphequluli, njll Advanced Uhlelo uyakwazi ukuthuthukisa izilungiselelo zakho internet connection, ukuphatha zokuqala isicelo futhi sifeze defragmention of the system ifayela. Futhi Advanced Uhlelo iqukethe scan modules ejulile, okwenza ukuba uthole futhi ukuqeda iningi nezinkinga ezihlobene ukusebenza computer yakho.
Analysis kanye nokwenza kahle uhlelo
Protection of computer ngokumelene spyware and malware
Ukuhlanza iqhakambisa ebhukwini uhlelo
Ukulungisa amaphutha ohlelweni
Thwebula Advanced SystemCare
Amazwana ku Advanced SystemCare
Advanced SystemCare software ehlobene
Isofthiwe elungisa amaphutha futhi ahlanze ebhukwini uhlelo. Isofthiwe iqukethe amathuluzi eyengeziwe ngcono ukusebenza computer.
A software sifaniso ezibukwayo okuhlukile ezahlukene ifayela efanayo mayelana umehluko kanye ukuvumelanisa izinguquko kwethulwa.
Ithuluzi esikahle ukuxhumana nabantu emhlabeni wonke. Uhlelo ikuvumela ukuba ukuxhumana usebenzisa izwi kanye video izingcingo noma imiyalezo.